Ị nwere ike bugharia gị mkpachị gị ọrụ dị ka nke a bụ uru na re-iwu oyiyi na e weere na ndekọ ngwaọrụ ẹkenịmde n'akụkụ n'oge ndekọ.
Ọtụtụ ngwa ọdịnala na mmemme ike ga-eji bugharia videos na a nyere direction. Mgbe na ụfọdụ ngwaọrụ dị ka smartphones n'usoro n'usoro a video nwere ike ịbụ ka mfe dị ka iji mkpịsị aka gị jikwaa adiana.
Part1: Olee bugharia a video na iMovie on Mac
Part2: Olee bugharia a video na iMovie on iPhone / iPad
Part3: Olee bugharia a video on Windows iji Wondershare Video Ntụgharị
Mepee oru ngo nchọgharị na iMovie.
Pịa na video n'ime oru ngo window iji họrọ ya.
Press na C isi iji rụọ ọrụ akuku ọrụ bọtịnụ.
Pịa na ma ekpe ma ọ bụ aka nri adiana buttons na-enye ya ndị chọrọ mmetụta.
Iji kpatụ image dabara ihuenyo, pịa na akuku bọtịnụ na elu akaekpe nke window.
A dapụtara green window ga-egosi na nke i nwere ike ịgbanwe green window ya site Anam Udeme n'akụkụ na-anabata kwesịrị ekwesị.
Ị nwere ike pịa "dabara" maka dum image na-egosi kama nke n'elu usoro.
Pịa play button na elu nri akuku ka ịhụchalụ mgbanwe.
Pịa Emela rụchaa usoro.
Emeghe gị oru ngo na iMovie ngwa.
Gbadaa na usoro iheomume ka ebe clip ị chọrọ emi odude ke nkiri.
Mgbe na-ekiri, na-eji mkpịsị aka gị bugharia clip klookwaisi ma ọ bụ anticlockwise.
A na-acha ọcha akụ ga-egosi na ntụziaka nke adiana.
Video Converter Ultimate Si Wondershare bụ ihe ịtụnanya video edezi software na-abịa na a usu video edezi atụmatụ ma ọ bụ ngwaọrụ na-eme ka edezi videos a ikuku. N'eziokwu, i nwere ike ime karịrị nnọọ tọghata gị videos, ihe atụ, ị nwere ike idezi, welie, download, hazie, ọkụ, kpọọ, na-ekiri vidio na ihe karịrị 150 formats iji Video Converter Ultimate.
Iji nchikota ya, ebe a bụ ndepụta nke ya ịtụnanya atụmatụ:
30x Faster Video Nchigharị
Tọghata ọ bụla usoro
Stream Media ka TV effortlessly
A Eserese enweghị DVD Ahụmahụ
1 Pịa Video Downloader
Na kwuru, ugbu a, ka anyị na-a anya na ihe nzọụkwụ na-abuana ke n'usoro n'usoro a video on Windows iji Wondershare Video Ntụgharị.
Ẹkedori Wondershare Video Ntụgharị si gị omume menu. Ọ bụrụ na ị na-adịghị, ọ ma, ị nwere ike ibudata ya site na ịpị ya ebe a.
Mbubata video faịlụ ka na-agba gburugburu wee pịa on Dezie image button-esote ya.
Site ọzọ popup window, họrọ Gbanwee taabụ.
Ugbu a, ị nwere ike họrọ si abụọ Bugharia buttons dị ka mkpa, 90 mgbochi klookwaisi ma ọ bụ gaa n'aka nri.
Ozugbo mere, pịa bọtịnụ 'OK'.
Ịzọpụta video na ọhụrụ kwekọọ direction, pịa na tọghata button akpatre.
Ya mere, ugbu a, ị maara ọtụtụ ụzọ i nwere ike bugharia video na a ụfọdụ direction ka ị chọrọ, na Mac, iPhone / iPad, na Windows dị ka mma. Na-aga n'ihu na-enwe!
> Resource> iMovie> Olee bugharia a video na iMovie